नेपालबारे दिएको वि’वादित बयानपछि अभिनेत्री नीता ढुङ्गानाको तिव्र आ’लोचना – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. नेपालबारे दिएको वि’वादित बयानपछि अभिनेत्री नीता ढुङ्गानाको तिव्र आ’लोचना – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
नेपालबारे दिएको वि’वादित बयानपछि अभिनेत्री नीता ढुङ्गानाको तिव्र आ’लोचना
कुनै समयकी चर्चित नेपाली अभिनेत्री नीता ढुङ्गाना आफ्नै बयानका कारण वि’वादमा तानिएकी छिन् ।
हालै उनले आफूलाई यो देशमा किन जन्मिएँ होला भन्ने लाग्न थाल्यो भन्दै दिएको बयानलाई लिएर उनका फ्यानहरु रि’साएका हुन् ।
उनले कलाकार हरिहर अधिकारीका पिताको नि’धनपछि मनको भावना व्यक्त गर्दै त्यस्तो बयान दिएकी हुन् । करिब एक बर्षदेखि हरिहरको प्रेममा रहेकी नीताले लेखेकी छिन्ः
‘मेरो देश मेरो गौरव भनेर सोच्ने मान्छे म, आज म किन यो देशमा जन्मिएँ होला जस्तो लागिरहेको छ । मेरो देशले मेरो रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आज आएर थाहा पाएँ ।
कोरोनाको विरु’द्ध संसार ल’डिरह’दा मेरो देशले मलाइ झन् ला’त हा’न्छ भ’न्ने कुरा आज आभास भयो । यो क’ठिन अवस्थामा जनताको लागि ल’ड्नुपर्ने तर यहाँ त ल’डाइ कुर्सीको लागि भैरहेको छ ।
समयमा अस्पतालमा उपचार नपाएर आज मैले मेरो नजिकको अग्रज गु’माएँ । सायद समयमा नै आइसियुको व्यवस्थापन भएको भए र समयमा नै अक्सिजन पाएको भए कसैले पनि अल्पायुमा ज्यान गु’माउनु पर्दैन थियो होला । हार्दिक श्रद्धाञ्जली बुवा, हजुरको वैकुण्ठमा बास होस्’
एकजनाले प्रतिकृया दिदैँ भन्नु भएको छ, ‘यहाँ दैनिक सयौं, अहिलेसम्म हजारौंले ज्यान गु’माए तिमीहरू केही बोलेनौ । बोल्न त परको कुरा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने समेत सोच्न सकेनौं । अहिले आफ्नो आफन्त, नजिकको मान्छे मर्दा देशै आफ्नो लाग्दैन भने आफ्नो लाग्ने देशमा गए भैगो नि’ अभिनेत्री ढुंगानाको विचारसँग अस’हमत हुँदै अर्को एकजनाले लेख्नु भएको छ, ‘उपचार नपाएर जो कोहिको नि’धन हुनु दुः खद कुरा हो ।
तर आफुलाई सेलिब्रेटी ठान्नेहरु आफुलाई नपरुन्जेल कहाँ थियौ । तिमीहरुलाई यो हैसियतमा पुर्याउन आम जनताको हात साथ छ । कहिल्ले बोल्यौ आम जनताको दुःखमा आँशुमा ? देश र जनताप्रति गैर जिम्मेवार र सनकी शासकको बिरु’द्दमा ?? दो’ष देशको हैन । दोष हो त यो देशका अविवेकी न’लायक शासक र तिमीहरु जस्ता आफुलाई आम मनुष्य भन्दा बेग्लै अर्कै ग्रहको मनुस्य ठान्नेहरुको हो ।’
यस्ता धेरै नै आ’क्रोशपू’र्ण प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् । अर्को एक जनाले भन्नु भएको छ, ‘एउटा कलाकारले आफ्नो मा’न्छे म’र्दा दे’शलाई गा’ली गर्नु राम्रो हुँदैन । जीवन पछि मर’न शा’श्वत सत्य हो अझ ज्योतिष विज्ञान पढेको मान्छेले यस्तो भन्नु उचित हुँदैन । यो देशमा किन जन्मे भन्नू र आफ्नी आमाको कोखबाट किन जन्मे भन्नु एउटै कुरा हो महावि’पत्ती हो डटेर सामना गरौं धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस हरिहर अधिकारीको परिवारलाई’ ! जनबोली न्यूज नेटवर्क
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको May 26, 2021 May 28, 2021 84 Viewed